Daawo: Faysal Waraabe oo ka hadlay Caqabadaha Horyaala Muuse Biixi iyo Layaabkii Isaga Doorashada Qabsaday | Kalshaale
Daawo: Faysal Waraabe oo ka hadlay Caqabadaha Horyaala Muuse Biixi iyo Layaabkii Isaga Doorashada Qabsaday
Dec 5, 2017 - 17 Aragtiyood
Hargeisa (Kalshaale) Faysal Cali waraabe ayaa ka hadlay Caqabadaha Hor yaala Madaxwaynaha la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, Isagoo sheegay inay Doorashu u dhacday Qabiil ahaan wuxuuna sheegay in wax laga qabto Qabyaalada Dadka kala gashay Xiligii doorashada.
Faysal ayaa sheegay in dhankiisa Dakhligii ugu badnaa uu uga baxay Ololaha Doorashada “Qof Kasta oo Jaadka Ku Ilko Beela, Waa In Lacag Looga Qaadaa Kuwa Keena” ayuu Faysal Waraabe
faysal qabiilbu qaran moodaya
Faysal aniga waa ka helay, siyaasi u tanaasula danta dadkiisa aad buu ixtiraam iiga mudan yahay, xoogaa qabiilka ha iska yareeyo, gobolkaaga u dood laakiin Somalida kale la jeclow horumar iyo nabad!
Puntland baa dhul gariir ka dhacay in ku farxilahaa shaki ka qabaa! Kkkkkkkkkll😝
faysal martamin mana tanasulin markii jamaal mesha laga cadhinayay yuu 300 milyan qatay markaa ninkii modaya inuu tanasulay waa nin aan waxba ogeen.waxaa tartamay kulmiye iyo wadani
Puntland midnimada Somaliya waa ku khatar .
Kooxda puntland dhamaan ciyaartoyda muqdisho shalay timid waxay qoorta u sudhna Calanka Qabiilkooda, lkn Captainka kooxda oo reer Laascanood ah waxaa qoorta ugu jiray Calanka dalkeena Somaliya . Wuu Ka diiday in Calan qabiil Ka hormariyo Calanka qaranka dalkeena 🇸🇴🇸🇴💙💚💜
Hargiesa Iyo Garoowe Somaliya waxba Kama qaadayaan inta Wiil Darwiish ah noolyahay !!!
Faysal Waraabe waa nijaas aanan xishoonayn. Waa arday xabasheed oo runta aqoon.
Doorashada habaraha Iidoor ka hor wuxuu ku dhaartay inuu isagu heli doono.
ciidagale waxay codkooda la kariyay dhaafi waayeen 20 kun
Imminka in riwayaadii Iidoor qabyaalad ahayd ayuu dadka u sheegayaa sida iyada oo Soomaalida kale moogan yihiin.
Haddii qaran dhab ah jiri lahaa mooryaankan iwm oo kale waxay ka soo heesi lahaayeen laanta Buur haddaan qoorta laga jaray.
Baaqani wuxuu ku socda guddoomiyaha Gobolka Benaadir Jaalle TAABID.
Guddoomiye Taabid Cabdi, wax eeda oon kuu hayyo ma jidho BEDELKEEDI waxaan kuu hayyaa ammaan TAASO ah; Markaad Amartay inaan la lacagayn gelidda beerta xurriyadda, in Marki lagu tusay faai’do làaanta ka dhalan karta, aadan laba-labayn ee aad durbadiba ka noqotay (flesibilità).
•Sheegtay damaqayge, ☆Haddiyo Dan, Jaalle Taabid Mar kaliya lama soo wada celikaro wixii Casimadda ka baabàay Marka waa inaad xubinba mar kabto, weliba kuwaan buuq badan kaaga imaanayn. XAMAR waa caasimaddi Waddanka oon lakala xigin SIDAA awgeed waa inay maamulkeeda ka wada muuqdaan 5ta beelood TAASOON aminsanahay inay wax weyn ka tari lahayd Ummad isu Qalbi xaaran, Kaliya ma ahee waxaa yaraa-lahayd dhallinyarada Badda & lama degaanka noga dhammaanaysa. Jaalle Taabid annaga saanay nala tahay:
1.In Degmooyinka loo qaybiyo 5ta beelood;
a)Waxay u helaan min 3dax Degmo, 2bada soo hartay Waxaa lakala siin beelaha REER XAMAR & REER MATTAAN.
b)Guddoomiye kasta waa inuu yahay mid degmadaa ku dhashay ama ku koray, wuxuuna Beeshiisa kala iman 4gaari & 13toban ciidan ah. Degma kasta waxaa ka shaqayn Dhillinyarada Degmada & Booliis hufan oo ay horjooge u yihiin saraakiishi hore & nabadsugid. Nadaafadda & hawlaha yar-yar oo kale Haweenka Degmada.
c)Dhaqaalaha; waxaa bixina GANACSATADA Degmada, 5/10/15$ hadba say u kala dhaqaalo badanyihiin.
d)Waa inuu jira Guddi isku dhafan oo beelaha oo si joogta u kor meera hufnaanta shaqada Degmooyinka.
@Jaalle Guddoomiye, waxaan kula talinayna inay nimanka (rag & dumar) aad dooranayso ay ahaadaan kuwo aad taqaan oo aad isla soo marteen Dugsiyadi ama aad mar dambe ku baratay Hufnaan. Ugu dambayn waxaa naga dardaarana; Ruuxi aad ku aragto qalad ama isdaba marin LA HUBSADAY inaad durbadiba iska fogayso.
Waxaan akhyaarta Barxadda ka codsana, in ciddi guud ahaan igu raacsan Taladaan inay ila Soofeeyaan ee AYSAN RÀYI kale barbardhigin sidii caadadeenna ahayd. TAASO macnaheedu yahay ‘yaan horay loo socon’. WBT.
Waxaan ka xumahay inuu Rooble Xarooday, wuxuu yiri; “axmed somali
adigu horta miyaanad cidba diidin
yacni somalia waad tagerta somaliland waad tagerta khatumo waad tagerta
aringaagu ma waxa weyaan kana fuulaye alaw fihaa wbt soo soco”
👬Rooble, adeer intuba waa waaxyahaygiiye, 2badeen gooya teebaanse reebta? WBT
Mudane Axmad Soomaali
Runti waa tala fiican in kasta oo meelaha qaar farta iiga taagan tahay sida guddoomiyaasha waa inay degmooyinka madaxda looga dhigahayo u dhashaan.
Si kastaba Caasimadda waxay ka dhaxaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waana inay ka muuqdaan maamulkeeda. Hadalkaa weeye kan wax dhisahayo
Fikraddaasi waa mid caafimaad qabta
Axmed somali, si fiican baad u dhigtay, xamar waa caasimad somali oo dhan ka dhaxaysa oo aan lakala lahayn, hadaba hadii uu farmaajo rabo inay somaliya noqoto dowlad wax ku ool ah oo awood leh waa inuu maamulka caasimada kadhigo 4.5, waayo xamar lamid ma ahan magaalooyinka sida gaarka ah loo leeyahay ee ay kamidka yihiin: jowhar, cadaado, garowe, buhodle, hargaysa, baydhabo iyo kismayo, waana hubaa inuu farmaajo kadhigi doono xamar caasimad somali oo dhan u dhaxaysa ee waxuu rabaa inuu marka hore daro ku qabto moryanta dabshid iyo noociisa oo kale ah ee wakhti aynu siino
Wadanku waa fadaraal nin walbo tuuladiisa ha dhisto xamar maamulkeeda 5 somaliyeed haloo qibiyo
Hiraan hadaan tago axmed Somali ayaa iga mudan hadaan kismaayo tago suldaan Ali zubeer ayaa iga mudan dhuusamareeb hadaan tago cadaado ayaa iga mudan hadaan jowhar tago malaha wiil hiraab ayaa iga mudan
Waa cadaalada somalida macquulka ah
Hadii saas lagu helaayo jiritaankii somaliya oo wada qanacsan waan soo dhaweynayaa
Dadka xamar kunool hadaba xuquuq Malahan dowladana iyagaa wax taro
Weliba sidaas ayey eedeysanayaal ku yihiin
Faysal Futa waraabe waa Munaafaq marba ninkii madaxtooyada yimaada ayuu ufataalaa,sidii uu Gaaniba ugufataalijiray.Waa wasakh fooqal wasakh siyaasana mayaqaan dibna ugusoolaaban maayo masraxa siyaasada soomaaliweyn.
Xamar waa Caasimada Somaliya.Dadka degan ayaa xaq ule maamulkeed.Degmo kasta dadka degan ayaa ka soo baxaya.Cidda ay doonaan ha ahaadaan,laakiin waa inay yihiin dadka degaanka degan.
Wixii kale waa dagaal hunguri iyo nacasnimada Somalida daashatay.
Ethopiya waa Federal sida aad tusaalaha uGu soo qaadataan.dee maamulkeedu kama yimaado Kililada Somalida ama Amxaarada.
ABTI, FAYSAL CALI WARAABE, waa CIIDAGALE. CIIDAGALE waxaa uu ka yahay qabaailka ISAAQA waad iska ogtiheen.
FAYSAL CALI WARAABE, ninkii soo saari lahaa UCUD, waa tee uu la dagaalamay ee wiilka laandheeraha ah ee DR. JAMAAL.
Marka, ha iska ahaato, CIIDAGALE WAA AAWAY…………..
Suldaan Ali Zubeer; “meelaha qaar farta iiga taagan tahay sida guddoomiyaasha waa inay degmooyinka madaxda looga dhigahayo u dhashaan”. *Suldaan, ma hubo inaan si fiican u gartay ‘farta taagan’ haddii ay tahay “u dhashaan”, waxaan ka wada ‘Ku dhasheen ama ku dhaqmeen’ beel kastana waa laga heli.
■Garqaad; Dadka xamar kunool hadaba xuquuq Malahan dowladana iyagaa wax taro
😟Adeer, jawaabti waa tan Mr BaHaL ‘
Xamar waa Caasimada Somaliya.Dadka degan ayaa xaq ule maamulkeed.Degmo kasta dadka degan ayaa ka soo baxaya.Cidda ay doonaan ha ahaadaan,laakiin waa inay yihiin dadka degaanka degan’.@Garqaad?????????? waxay ila tahay in Fari kuu laabantahay. WBT
Anigu inta badan ma jecli dooda ku saabsan wax qeybsiga murankeeda
Anigu waxaan jeclaan lahaa nink raas caseyr ka yimid iyo midk cali sabiix ka yimid in aan wax wada yeelano marka laga reebo gurigeyga iyo beerteyda
Sidaasna meesha looga saaro fadaraalkaan hunguriga ah
Hadiise la diiday oo la yiraa wadanku waa fadaraal
Hadalka mr baahal ayaa dhameeyay xamar ninka degan ama ku dhashay ayaa maamulkeeda xaq u leh
NO more in xasan abshir oo kale uu guverno ka noqdo xamar
Hadalku maku dhacay
Feysal Waraabe oo dalaalnimo u xuub siibtey,
Governor Galeyr ayuu shaaha u shubahayaa,